FIKRADDA GANACSIGAAGA GAARKA AH: WAX SOO SAARKA KHUDRADDA IYO MIRAHA LA QABOOJIYEY - WARARKA
Khuraafaadka ah inaysan jirin fitamiino iyo walxo kale oo waxtar u leh miraha iyo khudradda la qaboojiyay ayaa la badalay ku dhawaad ​​30 sano ka hor. Tani waxay door weyn ka qaadatay horumarinta ganacsiga ee jihada this.
Sannadkii 90-aad, hoggaaminta marka la soo saaro badeecadahaas oo la keeno dhul-beereedka Ruushka waxaa degay shirkado shisheeye. Waqti ka dib, saamiga alaabta ee qaabka hadiyado la qaboojiyey ee dabiiciga ah ee suuqa Russia ayaa si weyn u kordhay by soo saarayaasha gudaha.
Xilligan, kobaca sanadlaha ee soo-saarka cunnada noocan oo kale ah ayaa sii kordhaysa 10%. Codsigu wuxuu sidoo kale sii kordhayaa, taas oo sabab u ah in uu ka fekero sidii loo bilaabi lahaa ganacsi si loo xakameeyo berry, khudradda iyo miraha iibkooda kadib.
Maxay tahay baahida loo qabo miro la qaboojiyey, miraha iyo khudaarta sii kordhaya?
In habka wax soo saarka iyada oo la isticmaalayo tiknooloojiyada khalkhalka shoogga.
Mabda'a halkan waa kuwan soo socda: heerkulka gudaha dufanka midhaha -300C dhowr daqiiqo gudahood.
Sidan ayaa suurtagal ah in lagu badbaadiyo illaa 90% dhammaan walxaha waxtarka leh, tusaale ahaan, berry. Midabka, qaabka, dhadhanka iyo carafka ayaan weli isbeddelin.
Cuntooyinka iyo soonka dad badan ayaa sidoo kale ka mid ah sababaha keena caanno qaboobaha. Xaaladahaas oo kale, cunnooyinkaas ayaa ah mid ku haboon.
Sabab kale oo ah kororka dalabka ee miraha iyo khudradda, oo lagu baaraandegayo habka shakiga shoogga leh - heerka sare ee shaqada ee galmada caddaaladda.
Wax walba waa wax sahlan: haweeney lagu qasbay inay waqti badan ku qaadato shaqadu waxay diidday inay cunto u kaydiso jiilaalka. Tani waa halka khudradda iyo khudradda la kariyey ee laga soo iibsaday dukaanka u yimid badbaadinta. Haddii aad haysato alaabtan oo kale, maraq, salad, macmacaan ama saxan kale ayaa la kariyaa 15 daqiiqo.
Maxaa la qaboojin karaa?
Nidaamka cuntada lagu xakameynayo shooga cuntada waxaa loo adeegsadaa hooyooyinka sida maaddooyinka loogu talagalay diyaarinta suufka guriga, hilibyada ka shaqeeya xarumaha cunto-kariska, keega cuntada.
Kooxaha ugu waaweyn ee hadiyadaha dabiiciga ah ee la qaboojin karo waxaa ka mid ah:
strawberries, fersken, pears, tufaax, raspberries, abrikot, jeeriga;
dill, dhir, rosemary, basil;
baradhada, hadhuudhka, yaanyada, kaabajka, bocorka, broccoli, karootada, isbinaajka, basasha, digirta;
Boqoshaada Oyster, boqoshaada (boqoshaada).
Alaabta la qaboojiyey waxaa lagu kaydin karaa foomkan illaa 2 sano.
Qaadashada dhamaan qalabka lagama maarmaanka ah si loo furo wax soo saarkooda qiyaastii waa 4 milyan oo gaaban.
Tani waa haddii loo baahan yahay in la qaato waxqabadka 300 kiilo oo badeecado ah saacaddii.
Laakiin waxaa suurtagal ah in la yareeyo kharashaadka iyada oo la iibsanayo unugyada yaryar ee qaboojiyeyaasha oo yar, iyo sidoo kale inay iibsadaan khadad buug ah oo loogu talagalay alaabada wax lagu xiro halkii ay ka midkaawnayd.
Intaa waxa dheer, waxaad soo iibsan kartaa qalabkii hore loo isticmaalay (loo isticmaalay). Xaaladdan, waxqabadka wuxuu hoos u dhigi doonaa 100 kiiloogaraam saacaddiiba, laakiin kharashka kama badnaan doono 1.5 milyan oo riwaayad ah.
Si aad u furto dukaanka waxaad u baahan tahay inaad iibsato:
tunnel waa barafoobay.
Barafeeyaha si loogu kaydiyo waxyaabaha soo go'ay.
Shaxda waa wax soo saarka.
Ku dhaq qubeyska.
Qashinka iyo kaydinta.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa kale oo lagama maarmaan ah in lagu hayo qolka wax soo saarka iyo kaydinta.
Heerarka wax soo saarka
Howlaha xajinta waxay ka kooban tahay tallaabooyin taxane ah. Waxay yihiin sida soo socota:
goosashada iyo keenista;
aqbalaadda beeraha, khudaarta, boqoshaada ama miraha iyo go'aaminta dhadhanka, muuqaalka, heerka dareenka;
nadiifinta hadiyadaha dabiiciga ah ee qashinka, tufaaxa, godadka;
dhaqashada si loo soo saaro dhalooyinka, dhagaxyada;
kala soocida talooyinka, tusaale ahaan, digirta cagaaran;
oo ka soo baxaya midhihii yaraa;
miisaan, xirxirid, gelinta xirmada macluumaadka loo baahan yahay;
bacaha lagu geliyo baakadaha kartoonka;
soo iibinta alaabta la dhammeeyey.
Gaadiidka miraha la qaboojiyey, khudradda, miro iyo boqoshaada waxaa lagu sameeyaa qaboojiye khaas ah heerkul aan ka badnayn -180C. Maaddaama iibsashada iyo dayactirka gawaarida noocan oo kale ah ay ku kacdo kharash badan, waxaa habboon in la isticmaalo adeegsiga shirkadaha daruuriga ah.
Ugu sarreysiga iibka ganacsigan wuxuu hoos u dhacaa bilaha jiilaalka iyo horraanta gu'ga, maadaama miro cusub aan laga heli karin iibsadayaasha waqtigaan ama qiimaha waa ka sarreeyaa.
Xilliga xagaaga waa wakhtigii lagu iibsan lahaa alaabta ceeriin ah, iyaga oo ka baaraandegta iyo bakhaarada buuxiya. A weyn oo ka mid ah hadiyadaha dabiiciga ah ee la qaboojiyey by this habka waa in aanay yihiin kuwo lumi karo iyo lagu keydin karaa xaaladaha ku habboon ilaa 24 bilood.
Nidaamka iibka ee abaabulan ee alaabada la soo saaro waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee guusha ganacsiga.
Haddii dhaqdhaqaaqa noocaas ah lagu qabto magaalo yar, fursadaha lagu xallinayo iibinta alaabooyinka leh mulkiilayaasha dukaamada iyo dukaamada waa kuwo ballaaran.
Heshiis ballaaran, waa inaad bixisaa si aad u hesho alaabtaada si ay ugu muuqato xarumaha dukaamada.
Mawduuc muhiim ah waa aasaaska xidhiidhka makhaayadaha, makhaayadaha, cuntada degdega ah, makhaayadaha. Dhacdooyinka dhadhanka iyo dalladaha kala duwan ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya kordhinta iibka.
Lacagta maalgashatey horumarinta ganacsiga waxaa si buuxda loogu soo celiyaa 3-4 sano.
Waxaan sidoo kale kuugu soo bandhigaynaa fiidiyoow ku saabsan mawduucan: